Wednesday October 17, 2018 - 08:04:03 in Wararka by Super Admin
Waxaa soo gaba gaboowday mudadii loo qabtay kooxaha mucaaradka Suuriya in ay hubkooda culus kalasoo baxaan baadiyaha magaalada Idlib si loo dhaqan galiyo heshiiskii ay kala saxiixdeen Ruushka iyo Turkiga ee dhigayay in magaalada Idlib lagu hareereeyo mandiqad hubka ka caagan si looga fogaado duullaan ay ciidanka Nuseyriyada ku qaadaan magaalada Idlib.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhaqan galka heshiiska oo kooxaha mucaaradka ay kukala aragti duwan yihiin, lamana oga sida uu noqon doono xaalka magaalada Idlib saacadaha soo socda.
Qaar kamid ah koooxaha mucaaradka ee taageerada ka helo wadamada Carabta iyo Turkiga ayaa horay u shaaciyey in ay aqbaleen heshiiski Sochiee dhex maray Turkiga iyo Ruushka ayna hubkooda culus kalasoo bexeen goobihii lagu ballamay in laga dhigo mandiqad hubka ka caagan, balse kooxaha jihaadiyiinta ah ee mandiqada kajiro ayaa arinkan si adag uga hor yimid.
Kooxda Xuraasudiin ee la sheego in ay tahay faraca Alqaacida ee dhulka Shaam ayaa isbuucyo ka hor shaacisay mowqifkeeda ku aaddan heshiiskan waxa ayna tilmaantay in aysan marnaba u hoggaansami doonin halka Hay’adda Taxriiru Shaam ee uu hogaamiyo Abuu Muxamed Aljowlaanina mowqifkeeda ay caddeysay oo ay soo saartay bayaan diidmo qayaxan ah.
Taxriiru Shaam ayaa tilmaantay in heshiiskan uu qeyb ka yahay qorshaha dowladda ruushka ay waddo ee la doonayo in lagu daciifiyo awoodda jamaacaadka jihaadiga ah uusana aheyn wax la aqbali karo iyadana aysan u hoggaansami doonin.
Hey’adda ayaa tilmaantay in qaraarkeeda ay dib u dhigatay si ay wada tashiyo ula sameyso jamaacaadka kale ee jihaadiga ah ee kajiro woqooyiga magaalada Idlib ee xurta ah mowqifkoodana u yahay in aysan marnaba ka tagin jihaadka si ay u gaaraan hadafkii ay ka lahaayeen thowrada dhulka sham ee ahaa in Nidaamka Dhiigya cabka ah ee Bishaar Al-Asad meesha laga saaro.
Bayaanka ayaa lagu yiri " Hubkeenu waa difaaca koowaad ee Thowrada Dhulka Shaam iyo qodaxdii lagu difaacayey xuquuqda dadka Ahlu Sunanaha ah ee kudhaqan wadanka Suuriya" waxa ayna adkeeysay in isku day kasta oo nidaamka Al-Asad uu sameeyo uu kusoo dhamaan doono fashal iyo guul daro.
Sidoo kale Hay'adda Taxriiru Shaam ayaa ganafka ku dhufatay in aysan dowladaha shisheeye ugacan gelin doonin ragga muhaajiriinta ah ee sufuufteeda kujira iyadoo carrabka ku dhufatay in qofka muslimka ah meel walba oo uu joogo uusan ajaanib ka aheyn walaalihiisa kale, jamaacadu waxay ballan qaaday in muhaajiriinta ay difaacayso ayna walaashanayso cid walba muslim ah oo hijro uyimid mandiqadda shaam.
Dowlada Turkiga oo u xil saarneed dhaqan gelinta heshiiskan ee dhanka kooxaha mucaaradka Suuriya ayaa la sheegaya in iminka ay ku sugan tahay mowqif adag, Saxafiyiinta ku sugan magaalada Idlibna waxa ay sheegayaan in kooxihi Jihaadiyiinta ahaa wali ay ku sugan yihiin difaacyadii ay ku lahaayeen baadiyaha gobolka Idlib.
Falanqeeye u shaqeeya Markazka daraasaadka cimraan ee fadhigiisu yahay magaalada Ankara ayaa ka dhawaajiyey in qaraarka jamaacaadka jihaadiga ah ee kajiro magaalada Idlib sida Taxriru Shaam iyo Xuraasudiin uu dowlada Turkiga hor dhigayo laba Khiyaar midkood, kaas oo midka koowaad uu yahay in ciidankeeda oo kaashanaya fasaa'ishii aqbalay heshiiski Sochi ay weeraraan Taxriiru Shaam iyo jamaacaadka kale ee diiday heshiiskan ama in Nidaamka Al-Asad oo kaashanaya dowlada Ruushka ay ka faa'iideysataan qaraaraadkooda oo weerar ay ku qaadaan magaalada Idlib oo ah magaalada kaliya ee kusoo hartay gacanta kooxaha mucaaradka Suuriya.
Qaraxyo ay ku halaagsameen Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka dhacay Gobolka Baay iyo ciidamo lagu weeraray Sh/Hoose.
Xoogaga Jihaadiga Taliban oo Weeraro Cagmarin ah ka fuliyay Koonfurta Afghanistan.